JA Solar dia manome jiro maitso ho an'ny lalao ho avy any Beijing
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » JA Solar dia manome jiro maitso ho an'ny lalao ho avy any Beijing
Amin'ny maha-mpanohana ny fampandrosoana maitso azy, JA Solar dia nanatevin-daharana ny laharan'ny manome herinaratra maitso ho an'ny lalao ho avy any Beijing. Ao amin'ny Zhangjiakou, Faritanin'i Hebei, ny tetik'asa fiompiana biby Guyuan 200MW sy ny fampidirana ny masoandro dia hanome hery maitso ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena manan-tantara miaraka amin'ireo maody monocrystalline mahomby indrindra an'ny JA Solar. Mamokatra herinaratra 430 tapitrisa kWh isan-taona ny tetikasa, mitovy amin’ny fampihenana ny fanjifana arintany 129,000 taonina sy 300,000 taonina ny famoahana gazy karbonika.
Amin'ny alalan'ny fitambaran'ny fiompiana sy ny famokarana herinaratra PV, ny tetikasa, izay mifanaraka tsara amin'ny toetr'andro any amin'ny tany mafana any Guyuan, dia manome sakafo sahaza ho an'ny biby fiompy sady mamokatra herinaratra be dia be, ka mampiasa tsara ny harena an-kibon'ny tany mba hahazoana tombotsoa ho an'ny roa tonta. toekarena sy ny tontolo iainana.
Amin'ny maha-mpamily ny fanavaozana ara-teknolojia amin'ny indostrian'ny PV, JA Solar dia nanolo-tena hampiroborobo ny fampidirana ny famokarana, fampianarana ary fikarohana. Tany Zhangjiakou, tanàna mpiara-miombon'antoka amin'ny lalao, no natao vao haingana araka ny efa nomanina ny fifaninanana Solar Decathlon China (SDC) faha-3. Tohanan'ny JA Solar, ary novolavolain'ny ekipan'ny SolarArk 3.0 sy XJTU+, dia vita soa aman-tsara ireo trano eco-mitsitsy angovo miaraka amin'ny rafi-masoandro. Ireo trano eco-eco, napetraka miaraka amin'ny JA Solar DeepBlue 3.0 maody mahomby avo lenta ary mikendry ny "fampandrosoana maharitra, fifandraisana matotra ary ny fahasalaman'ny olombelona", dia fakan-tahaka amin'ny fampiroboroboana sy fampiharana ny photovoltaics.
Ny hetsika andrasan'ny maro ao Beijing, dia voatendry ho voarakitra ao amin'ny tantara ao anatin'ny tontolon'ny tsy fiandaniana eran-tany amin'ny karbônina, rehefa sambany tao anatin'ny 100 taona tantarany, ho voarakotry ny hery maitso 100% ny toerana rehetra.
Hoy ny fitenenana hoe: “Ny rano madio sy ny tendrombohitra maitso dia tsara toy ny tendrombohitra volamena sy volafotsy”. Tontolo iainana tsara kokoa no tadiavinay ary amin'ny alàlan'ny fandraisana ny lalao any Beijing ho toy ny fotoana iray, JA Solar dia manantena ny hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa taloha sy vaovao mba hanaparitahana ny foto-kevitry ny fampandrosoana ambany karbônina sy maitso manerantany ary hampiroborobo ny fananganana ny Zero Carbon Society.